မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်တန်းဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ချစ်သက်လက်ဆောင်လေးတွေကိုပေးရင်း ရိုပြလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံ - KyautthinPone
ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ(၃၀)ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့သရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာသက်တမ်း(၇)နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ (၂၀၁၄)ခုနှစ်မှာ နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး (၂၀၁၇)ခုနှစ်မှာ ခေတ်(မေမြန်မာခေတ်)နဲ့သစ်(မေမြန်မာသစ်)ဆိုတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးထားခဲ့ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေးတည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးဟာ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အမှတ်တရရှိတဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အပြန်အလှန် ချစ်သက်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ချစ်သုဝေက အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ယခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “7th year anniversary ကိုယ့်ရွေးချယ်မှူမှတဆင့် ရရှိခဲ့တဲ့ကောင်းချီးလေးများနှင့်ဖေ့ကို “လက်ဆောင်?? “ဆိုတော့ kissတဲ့
မေရောဘာပေးမှာတုန်းဆိုတော့..”ပေးထားတယ်လေ အဲ့မှာတသက်စာလို့ ” boss ၂ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ် အောင်မလေးလင်မယား၂ယောက်အကုန်အကျတွေများပြီး ro နေလိုက်တာများ အဲ့ဒါနဲ့ fbပေါ် တက်ကြွားရတော့တာပဲတက်သာကြွားရတာပေးမယ်ဆိုတဲ့ ‘kiss’တောင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူး အဟေးဟေး မိန်းမထုကြီးကျုပ်ကို အရမ်းတွေအားကျသွားကြပြီမဟုတ်လား??? ကျေနပ်တယ်ဂွပ်”ဆိုပြီးရေးသားကာ မျှဝေပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် မင်္ဂလာသက်တမ်း(၇)နှစ်ပြည့်မှစပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
Previous Article ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးအတွက်ရည်စူးပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုဗစ်စင်တာမှာ အလှူငွေများသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေယံ
Next Article မောင်နဲ့အတူ ချစ်သူသက်တမ်း(၂)လပြည့်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကြည်နူးစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်